स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि बसभित्र मौन बसौं | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि बसभित्र मौन बसौं
कात्तिक ६ गते, २०७७ - ०८:४१
काठमाडौं । सरकारको आग्रहलाई बेवास्ता गरी दसैं मनाउन बस चढेर घर जाँदै हुनुहुन्छ ? त्यसो हो भने स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि यी उपाय अपनाउन नबिर्सिनु होला । बसभित्र फेससिल्ड र मास्क लगाऔं । मौन बसौं। झ्याल खुलै राखौं ।
आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ – शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुका क्लिनिकल रिसर्च युनिट संयोजक डा. शेरबहादुर पुन बसभित्र भौतिक दूरी पालनाको सम्भावना न्यून हुने बताउँछन् । ‘बसभित्र सिटको दूरी निकै कम हुन्छ । त्यसैले मास्क लगाउनु पर्छ । मौन रहनु पर्छ’, डा. पुन भन्छन्, ‘झ्याल खुला राख्दा संक्रमणको जोखिम न्यून हुन्छ ।’ नाक र मुखबाट निस्किने छिटा हावामै पनि तैरिन सक्ने भएकाले बसको झ्यालढोका खुलै राख्दा संक्रमणको जोखिम कम हुने डा. पुन बताउँछन् ।
प्रवक्ता डा. गौतमले लामो यात्रा गरेको व्यक्तिलाई गाउँघरमा देखे सात दिन क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने बताए । ‘कोरोना सार्ने सम्भावना भएकोले केहि दिन क्वारेन्टाइनमा राख्न भनिएको हो’, उनले भने ।
कात्तिक ६ गते, २०७७ - ०८:४१ मा प्रकाशित